Dimmer နှင့်ဝေးလံခေါင်သီသော troubleshooting - MediaLight ဘက်လိုက်မှုအလင်းရောင်
Dimmer နှင့်ဝေးလံခေါင်သီ troubleshooting
ကျွန်ုပ်တို့သည် dimmer ပြissuesနာများကိုဖြေရှင်းသည့်အသုံးအများဆုံးပြeshနာဖြေရှင်းရေးအဆင့်များစာရင်းပြုစုထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အချို့မေးခွန်းများသည်သိသာထင်ရှားနေပုံရသည့်အတွက်ဝမ်းနည်းပါသည်၊ သို့သော်အဆင့်များကိုအထိရောက်ဆုံးဖြေရှင်းနည်းများဖြင့်စာရင်းပြုစုထားသည်။ တနည်းအားဖြင့် power switch မဖွင့်ခြင်းသည်အမှန်တကယ်ပင်ပြtheနာဖြစ်သည်။
အကယ်၍ ရှိခဲ့လျှင်၊ ၎င်းတို့အားပထမဆုံးအကြိမ်ဖွင့်ချိန်တုံ့ပြန်ရန်အလင်းကိုစက္ကန့်အနည်းငယ်ကျော်ပေးပါ။ တစ်ခါတစ်ရံမီးအသစ်များထဲသို့မီးထည့်သောအခါ power up နှောင့်နှေးသည်။
၂။ အကယ်၍ သင် TV / monitor / computer မှစွမ်းအားကိုသင်အသုံးပြုနေလျှင်၊ device ကိုဖွင့်ထားသလား။ Device တော်တော်များများသည် Device ကိုပိတ်ထားတုန်းကပါဝါကိုမပေးကြဘူး USB port ကိုလျှပ်စစ်မီးမရရင် dimmer အလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။
3) dimmer ပူးတွဲပါသလား? အဝေးထိန်းနှင့်အတူငြိမ်ခံနိုင်ရည်အိတ်၌ "LED controller ကို" မှေးမှိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာပူးတွဲခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ (ဒုတိယဝေးလံခေါင်ဖျားမှု၏အများဆုံးအဖြစ်များသည့်အကြောင်းရင်း working)
4) dimmer အကြားရှင်းရှင်းလင်းလင်းမျက်မှောက်လိုင်းရှိပါသလား? (ဒီဗီဒီယိုကိုနေရာချထားတဲ့လမ်းညွှန်နဲ့မြင်ဖူးလား?)
၅) ပါဝါအရင်းအမြစ်ကဘာလဲ။ (ယူနစ်တိုင်း မှလွဲ၍ Mk5 Eclipse တွင်ယူအက်စ်တွင် adapter ပါဝင်သည်) TV ပါဝါနဲ့အလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုရင် adapter နဲ့အလုပ်လုပ်သလား။ စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်မလုံလောက်ပါကပြproblemsနာများစွာဖြစ်ပေါ်သည်။ သတိပေးချက် - လျင်မြန်စွာအားသွင်းခြင်း (မကြာခဏလျှပ်စီးသော့ခတ်ဖြင့်မေးလေ့ရှိသည့် Q နှင့်အံဝင်ခွင်ကျ) adapters များသည် (ဘက်ထရီအားသွင်းရန်အရှိန်မြှင့်ရန်) ပါဝါကို modulate လုပ်သည်။ ၎င်းတို့သည်တောက်ပမှုဖြစ်စေပြီးဝေးလံခေါင်သီသောထိန်းချုပ်မှုကိုတွဲနေစဉ်အလုပ်မလုပ်နိုင်အောင်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
၆) သင်မတူညီသော power source (သင်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အသုံးပြုခဲ့သည့်မော်နီတာ၊ တီဗီ၊ ကွန်ပျူတာနှင့် adapter မှလွဲ၍) ကြိုးစားပြီးကြောင်းသေချာစွာစစ်ဆေးပါ။
၇) adapter ထဲသို့ ၀ င်ရောက်ပြီး plugging ပြီးတဲ့အခါ၊ ၁ မိနစ်လောက်စောင့်ပြီးပါက adapter နှင့်ချိတ်ဆက်စဉ် on / off ခလုတ်ကို ၁၀ ကြိမ်နှိပ်ပါ။ မီးကတုံ့ပြန်သလား။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် adapter ကိုအသုံးပြုစဉ်မီးလုံးကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖွင့်ရန် ၃ စက္ကန့်ခန့်ကြာသည်။ ၎င်းကို "power up delay" ဟုခေါ်ပြီး၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သည့် adapter ကိုအသုံးပြုသောအခါသို့မဟုတ်သင့် TV နှင့်ချိတ်ဆက်သောအခါဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ များသောအားဖြင့်သင်သည်၎င်းတို့ကိုပထမဆုံးအကြိမ်အသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်အချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးမပြုလျှင်သာဖြစ်လေ့ရှိသည်။
အကယ်၍ ဤပြissuesနာများသည်သင်၏အဝေးထိန်းထိန်းချုပ်မှုပြwနာများကိုမဖြေရှင်းနိုင်ပါက dimmer သည်ပြုတ်။ ကျွန်ုပ်တို့အစားထိုးပေးမည်။ chat မှတဆင့်သို့မဟုတ်အောက်ပါ contact form မှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆို dimmers များကို ၅ နှစ်ကြာဖုံးအုပ်ထားသည့်အတွက်ထပ်မံဖြစ်ပွားပါကကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ရန်မမေ့ပါနှင့်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏ Order ID နှင့်လိပ်စာကိုပေးပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အနာဂတ်ပြissuesနာများကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားသင်ပေးနိုင်သည့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းများရှိမရှိသိနိုင်ရန်ပြissuesနာများကို order ID အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ခြေရာခံသည်။ သူတို့မှာကြားချိန် မှစ၍ တစ်စုံတစ်ယောက်သည်မပြောင်းရွှေ့နိုင်ဟုဘယ်တော့မှမယူဆပါ။